တောင်သမန်သားလေး: Sing! Karaoke by Smule 3.8.1 APK
ရောက်လာသူ အပေါင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ...
Sing! Karaoke by Smule 3.8.1 APK
Update On, 24 June 2016
Update Version, Smule v3.8.1
File Size, 38.9 MB
Smule v3.8.1 အောက်ပါလင့်ခ်တွင်ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါပြီ။
Install from Google PlayDownload Apk File
Smule တွင် စတင်အသုံးသူသည် အကောင့်ပြုလုပ်ပြီးမှ တခြားသူများသီဆိုထားသော MP3 နှင့် MP4 များကို လိုက်လံကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး
မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မိမိသီဆိုချင်သည့် သီချင်းအား Smule ထဲတွင်ရိုတ်ရှာပြီး MP3 နှင့် MP4 ကြိုက်ရာကိုရွေးချယ်ကာ ကာရာအိုကေသီဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းသီဆိုရာတွင် တစ်ဦးတည်းသီဆိုခြင်း , စုံတွဲသီဆိုခြင်းနှင့် အဖွဲလိုက်သီခြင်း ဆိုပြီးတော့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိရှာဖွေလိုက်သော သီချင်းဟာ တီးလုံးနှင့်နောက်ခံအသံလေးဘဲ လာနေမှာဖြစ်လို့ ကိုယ်ကိုတိုင်သီချင်းဆိုပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ နာချပ်တပ်ပြီးသီဆိုပါက အသံအရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်ကာရာအိုကေသီဆိုရန် အကောင်းဆုံး SmuleSing Aplication နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲကသီချင်းတွေနဲ့ သီဆိုချင်ပါက http://www.smule.com/ ကိုသွားကာ ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကို Login ၀င်လိုက်ပြီး Upload နေရာမှာ သီချင်းကိုတင်ပေးလိုက်ပါ ဒါဆိုရင် Smule App ရဲ့ ကိုယ့်အကောင့်ထဲမှာသီချင်းရောက်နေပါလိမ့်မယ် ဒါဆိုရင် ဆိုလို့ ရပါပြီ။
မိမိသီဆိုပြီးသော သီချင်းဟာ Smule ရဲ့ News Feed ပေါ်သို့ ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး မိမိနှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်နေသူများရဲ့ News Feed တွင်သွားပေါ်နေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်တစ်ခုကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Smule တွင် သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်းအပြန်အလှန် မက်ဆေ့များပေးပို့ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VISA Card , Master Card ရှိသူများကတော့ VIP ၀ယ်ယူပြီး သီဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်နှစ်သက်ရာသီချင်းနဲ့ တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ စုံတွဲသီချင်းဖြစ်စေ အဖွဲလိုက်ဖြစ်စေ ကာရာအိုကေ သီဆိုဖို့အခုဘဲ Smule Application ကိုစမ်းသုံးကြည့်ရအောင်။
App ၏ File Size မှာ 46 MB မျှရှိပြီး Android OS Version 4.0.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးနိုင်ပါသည်။
Posted by lin linn at 5:12 AM
iOS နဲ့ Android အပြန်အလှန်ဖိုင်တွေဝေမျှ နိုင်တော့မယ့် OneDrive ရဲ့ UI အသစ်
ဖုန်းမှာ Virus တွေကို ကာကွယ်သတ်ပေးမယ့်-Avast Mobile Security & Antivirus 6.10.6 APK
မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Wordpress tutorial part 3
Facebook မှာ ကိုယ် လိုင်းတတ်နေတာကို ဘယ်သူမှမသိအောင် လုပ်နည်း
ဖုန်း နှင့် Tablet တွေမှာ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရန်နှင့် သီချင်းတွေနားထောင်းရန်-MX Player 1.9.16 for Android
Android Myanmar Apk များ စုစည်းမှု
Android Myanmar Appများ စုစည်းမှု
Android offline Readers (အင်တာနက် ငါးမီးနစ် ဖွင့်ပြီး Offline ဖြင့် သတင်းစုံဖတ်ရန်) Apk
Facebook (or) Android Downloader APK
Facebook Downloader APK
For Mobile Shop
I phone စုစည်းမှု
MP3Apk
Myanmar Font And Keyboard Apk
Power director video edition
Root and myanmar font
Samsung galaxy ဖုန်းများ
Telenor / MPT and Oredoo
မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင် ဖန်တီးခြင်းနှင့် ENCODE လုပ်ခြင်း
မြန်မာလို Ebook များ
လေ့လာစရာဖုန်းနည်းပညာ နှင့် အသုံးချမိုဘိုင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်များ
လေ့လာထားသင့်သည် လျှပ်စစ် ဖော်မြူလာ
▼ 2016 (2716)
▼ June (268)
ဗားရှင်းအသစ် TubeMate v2.2.9 Apk
မိမိမျက်နှာပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအလံတံဆိပ်လေးနဲ့ လန်...
Play Store မှာ App တွေကို အကန့် အသတ်နဲ့ ဒေါင်းယူပြ...
■ “Myanmar President Office” Viber Public Chat ■
ဖုန်း Screen ထထလင်းနေတဲ့ Error
✌ True Move H ဖြင့် ပုဂံကီးဘုတ် Code ဝယ်ယူနည်း✌
Viber မှာ မိမိ Online တတ်နေတာကို အခြားသူတွေမတွေ့ ရ...
ဖုန်းမှာမြန်မာစာ မှန်မှန်ကန်ကန် နဲ့ မြင်လို့ ဖတ်လိ...
Facebook ထဲက ဗီဒီယိုတွေ ဒေါင်းကြည့်မယ်နော် ဘယ်လောက...
Samsung Galaxy S4 SHV E330K LTE-A ဖုန်းအတွက် Andro...
Samsung Galaxy S4 SHV E330L LTE ဖုန်းအတွက် ဗားရှင်...
Asus Zenfone Auss 4.5(T00Q) Android 4.4.2 Root လုပ...
pCloud နဲ့Link လုပ်နည်း အစအဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင်
မိမိ နှစ်သက်ရာWeb Link တွေကို Apk တစ်ခုအဖြင့် ဖန်တ...
Facebook မှာ Fellow ပိတ်နည်း ဖွင့်နည်း
Facebook Password ပြောင်းနည်း
SMS နဲ့ CallLog တို့ကို Back-up / Restore ပြုလုပ်ခ...
ဗီဒီယိုတွေမှာထည့်ထားတဲ့ Logo ပုံတွေကို Remove လုပ်...
Zapya v 4.1.4(US) ဗားရှင်းအသစ်
Samsung Grand Prime SM-G531H ကို Root ဖေါက်နည်း + ...
Android Version 5xx အတွက် မြန်မာစာထည့်သွင်းနည်း [N...
Android ဖုန်းများတွင် ဖုန်းမှတ်ဉာဏ်ထဲရှိ မလိုအပ်သေ...
iOS Device တွေကို Passcode မေ့သွားလို့ Firmware ပြ...
Facebook Account Hack ခံထိသွားရင် ပြန်ယူနည်း
Messenger ထဲမှာ SMS ကို အတင်းပေါင်းထည့်ခဲ့တဲ့လုပ်ရ...
မိမိ Facebook Account ရဲ့ လိပ်စာလုပ်နည်း
WiFi Password ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်
Facebook မှာ မိမိ Like လုပ်ထားတဲ့ Page တွေကို မိမိ...
အခြားနိုင်ငံက ဖုန်းနံပါတ်အတုဖန်တီးပြီး Viber , Fac...
၀က်ဘ်ဆိုဒ်တိုင်းက သီချင်း၊ ဗီဒီယိုနဲ့ torrent ဖိုင...
ဓာတ်ပုံအရှင်လေးတွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Gif Maker မိုဘို...
ဓာတ်ပုံ / ဗွီဒီယို တို့ကို ဟာသ ပုံစံလုပ်ပေးမယ့် - ...
Samsung Galaxy S5 G900F/SM-G900T (Android 5xx 6xx)...
Android Version 4xx ကနေ 6xx တွေအတွက် Myanmar Zawgy...
လေချွန်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုတ်ကြမယ် Apk
ဘယ်သူမှ ငါ့ဖုန်းထဲက App တွေကိုမဖွင့်ရ ဖွင့်တာနဲ့ ဗ...
Facebook ChatBox မှာ အော်တိုစာပြန်ထားနည်း
ဖေ့ဘုတ်မှာ အော်တို့ Comment ပေးနိုင်မယ့် Auto Comm...
iOS9 ၏ Lock screen Notification စနစ်အား Disable ပြ...
ဖုန်းမှာ မှားဖျက်မိလိုက်တဲ့အရာတွေကို ပြန်ယူနည်း
OPPO ဖုန်းတွေကို Root လုပ်နည်း
ဖုန်းအဝင် Call တွေကို Password ခံပြီးဖုန်းကိုင်ကြမ...
သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို နားချပ်ဖြင့် တစ်ပြိုင်ထဲဖွင့်နိ...
အင်တာနက်လိုင်း မြန်ဆန်ပြီး Bill စားသက်သာစေတဲ့ - Pu...
♪ Android gallery app မှဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်တွေကို ဘယ်လ...
Samsung ဖုန်းများ System Update ဖြစ်ပြီး မြန်မာစာမ...
Samsung ဖုန်းတွေ အတွက် Pattern Lock ဖြုတ်နည်း (No ...
Facebook Email Account အသစ်ချိန်းနည်း
Facebook အကောင့် Hack မခံရအောင် ကာကွယ်နည်း
Facebook Account ဟက်နည်း
စမတ်ဖုန်း Root ဖောက်ချင်သောသူများအတွက် 360 Root AP...
မိမိဖုန်းကို လာကိုင်တာနဲ့ မီးသတ်ကားအသံနဲ့အချက်ပေးမ...
Viber စတေကာကို မြန်မာနိုင်ငံက အများဆုံး အသုံးပြု
Note5Root လုပ်နည်းနှင့် 5.0 to 6.0 MMfont Instal...
♪ စမတ်ဖုန်းမှာ Bluetooth ကို အသုံးချနည်းများ ♫
♪ Facebook Messenger မှာ ဖွက်ထားတဲ့ Messages များက...
Myanmar Zawgyi Font & Unicode Font Installer (2 in...
ဖုန်းက လေချွန်လိုက်တာနဲ့ အချက်ပေးမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲ
ငါ့နား ခြင်တစ်ကောင်မှ မလာရ Apk
ဖုန်းမှာ RAM ကိုပေါ့ပါးစေပြီး သုံးရတာမြန်ဆန်စေနိုင...
Samsung Galaxy-Rooted-[all Models] Firmware
Android Phone တွေကို မြန်မာစာစနစ် မှန်ကန်စေအောင်သွ...
Samsung Galaxy S7, S7 Edge ကို မြန်မာစာထည့်သွင်းနည...
မြန်မာစာ ၁၀၀% မှန်ကန်တဲ့ Google Translate လာပါပြီ
ဖောင့်စတိုင်မပါတဲ့ ဖုန်းတွေတွက် ဗားရှင်းအသစ် iFont...
ကိုယ့်ချစ်သူ သူ့ဖုန်းရှေ့ မှာ သူဘာလုပ်နေလဲ သူ့ မသိ...
မိမိခန္ဓာကိုယ်တွက် Gym ကစားနည်းတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့...
Clone Camera (ဓါတ်ပုံတွေကို လူ ကိုယ်ခွဲ အများကြီြး...
Android ဖုန်းမြန်မာဖောင့်တွက် All Easy Font Apk
သင်သေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက် သင့် Facebook Account ကိ...
Root မရတဲ့ ဖုန်းတွေအတွက် COC Zawgyi [Coc Zawgyi Ed...
♪ Android Phone အတွက် microSD Card ရွေးချယ်ဝယ်ယူနည...
♪ iPhone နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Live Photos တွေကို GIF အြ...
► 2015 (2269)